people Nepal » आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल चैत्र २० गते आईतबार आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल चैत्र २० गते आईतबार – people Nepal
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल चैत्र २० गते आईतबार
आज श्री शाके १९३९, वि.सं. २०७३ साल चैत्र २० गते आईतबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ अप्रिल २ तारीख, चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथी, १९:४१ बजे सम्म चन्द्रमा बृष राशिमा १८:१६ बजे सम्म सूर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु (ज्यो. प. सरोज घिमिरे)
आजको लगानि भोलिका निम्ति फाईदा जनक हुनेछ । कला तथा सौन्दर्यको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनि ले मन प्रशन्न रहला । खानपानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला । स्वास्थ सम्बन्धी समास्याले सताउन सक्छ । अरुको भर पर्दा कार्यक्षेत्रमा सामान्य अप्जस आउन सक्छ ।
तपाईको सरल मिजासले मित्रजनहरु आर्कशित हुने योग रहेको छ । मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य दिगो नरहन सक्छ । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा अरुले सहजै लिन सक्नेछन ।
सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । धनमालमा क्षति पुग्न सक्छ । अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । स्वास्थमा सामान्य समस्या आउन सक्छ ।
नयाँ कार्यको थालनि ले मन प्रशन्न रहला । बिभिन्न आम्दानिका स्रोतहरु फेला पर्ने छन । कार्य कुशलताले गर्दा सबै क्षेत्रमा चर्चा चल्नेछ । कुलकुटुम्बहरुको साथ सहयोले मन प्रशन्न रहला । आकस्मीक धन लाभको योग रहेको छ । हराएका सामान हरु फेला पर्न सक्नेछन ।
सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित गर्नाले मान सम्मानको योग रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा गरीएका कार्यहरु सफल रहनेछन् । सभा सम्मेलनमा सरीकहुने अवसर प्राप्त हुनेछ । मानसीक चन्चलताले सताउन सक्नेछ । तपाइृको कार्यको फाईदा गैर ब्यक्ति हरुलाई सहजै प्राप्त हुनेछ ।
प्रिय मित्रजन सगँको भेट घाटमा सामान्य खर्चको योग रहेको छ । धार्मीक सभासम्मेलनमा सहभागीता जनाउने अबशर प्राप्त हुनेछ । मित्रतथा दाजुभाई हरुको साथ सहयोग यथेष्ट प्राप्त रहनेछ । मनोरञ्जनात्मक यात्राको सम्भावना रहेको छ । मातृ पक्षको स्वास्थमा सामान्य खराबि उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
सामान्य स्थान्तरणका कारण कार्य क्षेत्रमा साधारण झन्भट ब्यर्होनु पर्नेछ ।स्वास्थ सम्बन्धी समस्याले सताउनसक्नेछ । तपाईको बोलिको खराब अशर देखापर्नेछ । साजेदारीकाममा भने मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । भोजभतेरमा सरीक हुने अबशर प्राप्त रहनेछ । कुराकाट्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ ।
पती पत्नि बिच मन मुटाब हुन सक्ला । ब्यापार ब्यवसायमा सामान्य घाटा आईपर्न सक्छ । पारीबारिक झोरझमेलाले सताउन सक्नेछ । कार्यसम्पादनमा बिशेष होसियार हुनु पर्ने छ । शारिरीक आलस्ताले सताउन सक्छ । खानपानको क्षेत्रमा समय राम्रो रहेको छ ।
मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ । प्रतिस्प्रदामा उत्रन तपाईकोे समय ले त्यति साथ दिने छैन । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य कार्यको निम्ति धेरै समय र परीश्रम खर्चनु पनेछ । आर्थिक अभाबको सामन गर्नु पर्ला । दिन मध्यम रहला ।
अरुको भर पर्नाले सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । मनोरञ्जनात्मक कार्यमा समय ब्यतित हुनेछ । तपाईको कार्य कुशलताले अरु ब्यक्तिलाई मोहित बनाउन सक्छ । पठनपाठनको क्षेत्रमा समय मध्यम रहेको छ । आम्दानिका स्रोतहरु फेला पर्नाले मनमा उत्साहा छाउनेछ ।
ब्यापार ब्यवसायमा समय राम्रो रहेको छ । आम्दानि मध्यम रहला । पारीबारीक साथसहयोगले मन प्रशन्न रहला । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु होला । सभासम्मेलनमा सहभागि हुन सक्ने योग रहेको छ । मानसम्मान प्राप्तिको सम्भाबना रहेको छ ।
मन राशि – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि
श्रम र परीश्रमको राम्रो कदर हुने योग रहेको छ । तपाईका रोकिएका कार्यहरु पूृनः सुचारु गर्दा सफलता प्राप्त हुनेछ । आटँ शाहसमा बृद्यि हुनाले तपाईका बिपक्क्षीहरु कमजोर रहनेछन । सामान्य यात्रा हुनसक्ला । मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।